Wax soo saarkani hoosta ka xariiqay ayaa gebi ahaanba muhiim u ah timaha jilicsan, caafimaadka qaba
In kastoo aan jeclaan lahayn inaan hagaajino howlaheena daryeelka timaha iyadoo la adeegsanayo khasnadaha jikada laga helo sida fargeeto (Sorry, Ariel), u adeegashada buraashka ugu fiican si aad ugu haboonaato nooca timahaaga, qaabkaaga, dhererkaaga, iyo dookhyada qaabeynta ayaa ka fog dhib badan. Burushka aad u isticmaasho inaad ku kala furfurto waxyaalaha xunxun ama aad u qaybiso ...
Burushka Timaha ee Ugu Fiican Naqshadaynta Raggaaga
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay burush timo wanaagsan. Hadday xoogaa gunti ka soo baxdo ama ay timahaaga siiso qaab dheeri ah, waa qalab isweydaarsi badan oo lagama maarmaan u ah in la eego midka ugu fiican. Dabcan, haddii aad ugaarsi ugu jirto mid cusub, markaa waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad hesho mid si wanaagsan loo sameeyay oo las ...
6-daan khabiir timo khabiir ah ayaa * isla markiiba * ku dari doona mug iyo dhumuc timahaaga
Haddii aad dooneysid inaad ku deydo lixdaneeye bouffant, ku dheji horay usdo ama si fudud u abuur dhaqdhaqaaq tolmo leh dhererka oo dhan, timaha baaxadda leh waligood qaab kama baxaan. Laakiin haddii aad ku dhalatay timo qurxoon, ama timahaagu ay noqdeen kuwo khafiif ah sannadihii la soo dhaafay, oo gaaraya mugga ...